निर्दोष कविताहरूको वासस्थान रहेछ 'गोधूलिको किनारा'
निर्दोष कविताहरूको वासस्थान रहेछ ‘गोधूलिको किनारा’
बज्रकुमार राई May 9, 2020
हङकङको नेपाली साहित्यमा नयाँ स्रष्टाहरुको आगमनले निरन्तरता पाई नै रहेको छ । विशेषतः कविता लेखनमा उद्धत जमातको संख्यात्मक उचाई बढ्दो छ । फलतः प्रत्येक वर्ष कविताका किताब प्रकाशन हुने गरेका छन् । सोही सिलसिलाका एक नव पात्र हुन्– कवि डोम राना र गोधूलीको किनारा ।
कविता लेख्नु सहज छैन । लेख्दा के, कसरी र किन लेखियो त ? भन्ने सुझबुझको अर्को जिम्मेवारीपूर्ण पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्योभन्दा पनि लेखेर कृति नै प्रकाशित गर्नु सबैभन्दा ठूलो विषय हो । साहस हो ।
हङकङको नेपाली साहित्यिक क्याम्पमा स्याङ्जाका डोम राना भर्ती भएर छिरिसकेका छन् । र, उनले कवि उपाधिको विल्ला पाईकेका छन् । समय जे भए पनि अब उप्रान्त उनी कवि डोम रानाबाट उम्कन पाउँदैनन् । म केही जान्दिनँ । मैले त्यसै उसै रहरै रहरमा पुस्तक छापेको भनेर उन्मुक्ति पाउँदैनन् । उनको सम्पूर्णताभित्र साहित्यिक जिम्मेवारी पनि हुनेछ सधैं । यो पङ्तिकार पनि सोही कारणबाट कविका कवित्व र प्रकाशित कृति “गोधुलीको किनारा“ बारे अक्षरशः केही बोल्न उपस्थित भएको हो ।
‘गोधुलीको किनारा’ भित्र प्रवेश
४७ थान कविताहरु राखेर निर्माण गरिएको यो पुस्तकमा पहिलो कविता ‘कल्पना’ शीर्षकबाट शुरु गरिएको छ ।
मेरा फूल्ने रहरहरु
आज निस्तेज भएको छन् ।’’
यही हो डोमको पहिलो गद्यांश ।
यसैमा अर्को हरफ –
“… फरक छन् धेरै फरक
मसँग समर्पित छैन
हेर्दा हेर्दै साइनो फेरिए ।“
यसरी ‘कल्पना’मा कविले वियोगान्त प्रणयको भाववेगलाई उद्घाटन गरेका छन् ।
“… काँडाविनाको फूलजस्तो
शून्यतामा हराएको मन
कुइरोमा हराएको काग
शायद तिम्रो जिन्दगी हैन
एकफेर मनन गरी हेर
प्रत्येक शीत घाम
अनि प्रचण्ड गर्मीको थप्पडसँगै
हरेक ऋतु खुशी नै छन् ।’’
– (अपरिहार्य जिन्दगी)
मान्छेको जीवनमा चुनौतीहरु हुन आवश्यक छन् । गारो–सारो, अप्ठ्यारो, खाँचो, तृप्त–अतृप्त, आरोह–अवरोह आदिले जीवनलाई ज्ञात–अज्ञात डोर्याइरहेका हुन्छन् । तानिरहेका हुन्छन् । निर्देश गरिरहेका हुन्छन् ।
जसरी सुन्दर फूललाई काँडाहरुले सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन् । काँडाको पनि आनै सुन्दर कर्तव्य छन् । यही मानकमा अडिएका छन् कवि ‘अपरिहार्य जिन्दगीमा’ ।
“… कति बगाए होलान् आँशु आमाहरुले
कति तड्पिए होलान् पिडामा बाबाहरु
कस्तो उच्चाहटलाग्दो दृश्य
जता हे¥यो उतै देखिन थाल्यो
जता गयो उतै भेटिन थाल्यो …“
कविले देखेको–भोगेको हिजो–आजको समय–परिस्थितिलाई तुलानात्मक रुपले यस कवितामा बोलेका छन् ।
हिजोका कष्टकर तर प्राकृत वातावरणमा बाँचेको मान्छेलाई आजको कृतिम दुनियाँ असहज लागेको विषय उठान गरेका छन् ।
अधिकांश कविताहरुले कविको मन–मुटु बोकेका छन् । प्रणयका अनेक रुप, भाव र अर्थमा कविता बाँचेका छन् ।
“… शिशरको गुलाबजस्तै
सिरेटोको थप्पड खाएर बाँचिरहें
गोधूलिको किनारा बनीरहें ।“
– (गोधूलिको किनारा)
यसरी कविको कल्पना, अनुभूति, विचार र भावुकताको मिश्रणले कविता रंगिएका छन् । जीवनका अनेक घटना-दुर्घटनाबाट स्वतः उब्जिएका भावभंगीतालाई कविले कविता बनाएका छन् ।
“… अनुभूतिको अन्तिम चिनारी
अर्पण गर्नेछु कसैलाई ।“
– (प्रभातीय किरण)
हिम्मत गर्नेहरुका लागि, कष्टका अनुभवले खारिएकाहरुका लागि, अँध्यारोबाट उज्यालो देख्नेहरुका लागि जीवनको समाप्ति कहिल्यै नहुने आंशिक तत्व बोकेका छन् कतिपय कविताले ।
विगतका रोमान्स र त्यसबाट पाएको चोटप्रति सकारात्मक स्वीकारोक्ति दिएको पाइन्छ कविताले । हरेक ती मिथ्या जस्ता लाग्ने सम्झना भुल्न सकेका छैनन् कविले । उही ढुङ्गेधाराको पानी पिउँदै स्मृतिको डाँडा चढेका छन् कवि । कल्पनाको विमानमा सयर गर्दै निकै नोस्टाल्जिक कविता जन्माएका छन् डोमले ।
सामान्यतः कविताहरु एकै धरातलीय मनोभावबाट प्रभावित लाग्दछन् । एकै वाक्यमा भनूँ भने स्मृति प्रणयका निर्दोष कविताहरुको वासस्थान रहेछ– गोधूलीको किनारा ।
यी भए कवि र कविताका आत्मीक पक्ष । कविताको आनै भाषाविज्ञान हुन्छ । कविको आनै कला, शिल्प–शैली, लय, भाव, विचार आदि हुन्छन् । विम्ब–प्रतिबिम्बका प्रयोग हुन्छन् । रोष, आवेग, कोमलता, चिन्तन, सहिष्णुता हुन्छन् । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय कविको मौलिकता हो । अहिले त कविताका अनेक आन्दोलन र कन्टेन्ट छन् । अझ कवितामा आञ्चलिकताको विषय पनि प्रखर रुपमा उठेको छ । यसर्थमा कविता लेख्दा घोत्लिनु, बेस्सरी कल्पनु राम्रो हो । लेख्ने क्रममा आफूले चाहेको विषयउपर एकदम आशक्त हुनु राम्रो हो । तर, अध्ययनविनाको घोत्ल्याई र कल्पाईबाट मात्रै सिर्जित कविता कोरा हुन्छन् । यो अर्थमा कवि केही हदसम्म चुकेका छन् । कवितामा विवेक अल्मलिएको देखिन्छ । कविताहरु लघु मात्राका छन् । लघु कविता र फुटकर कविता लेख्न त अझै बढी भाष्य क्षमता र कला–कौशलता चाहिन्छ ।
कविताको स्पष्ट प्लट चाहिन्छ । हुनतः कवि डोमले आफैं भनेका छन्– “मेरो वास्तविकता यही हो कि न मेरो साहित्यप्रति विगतको अनुभव छ, न त त्यस्तो मजबुद अध्ययन र चिन्तन नै ।’’
कविको यो स्वीकारोक्ति ठीकै होला । यद्यपि मानिसले किताबको ठेलीमा अक्षर पढेर मात्रै पनि सिक्ने, बुझ्ने होइन । अनुभव र अनुभूतिका लागि प्रत्येक भोगाईका क्षण हुन्छन् । यत्रो वर्षसम्म हङकङमा रहेर एउटै कविता यहाँको अवयवसँगको नलेखिनु यो संग्रहको खुम्चिलो पक्ष लाग्दछ । जीवनको लामै समय व्यतित गरेको कर्मभूमिको अनुभूत किन भएन होला आखिर ! भन्ने तर्कना मनमा स्वाभाविक उब्जिन्छ । यी यावत मनोकांक्षाहरुको उत्तरस्वरुप कविले आगामी दिनहरुमा अध्ययन र अनुभूतिले खारिएका निख्खर कविताहरु लेखेर सबैलाई सुम्पिने छन् भन्ने आशा राख्दै नेपाली काव्यजगतमा प्रवेश गरेकोप्रति बधाई दिन्छु ।
कविः डोम राना
कृतिः गोधूलिको किनारा (कवितासंग्रह)
प्रकाशकः साब्लाबुङ प्रकाशन, हङकङ ।
भूमिकाः प्रा.डा. कुमारप्रसाद कोइराला
भाषा सम्पादनः भावेश भुमरी